ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၅၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၅)
10 Jun 2018 . 12:31 PM
ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (ဖီဖာ)ကို စတင်တည်ထောင်တဲ့ နှစ် (၅၀)ပြည့်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ ၁၉၅၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ဖီဖာရုံးချုပ်တည်ရှိရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံက လက်ခံကျင်းပခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သမိုင်းတစ်လျှောက် ရုပ်သံကနေ ပထမဆုံးအကြိမ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၅၀ ပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဥရုဂွေးအသင်းနဲ့ ဒုတိယနေရာရခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ်အသင်းတို့ ခြေစစ်ပွဲ မကစားရဘဲ တိုက်ရိုက်ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်ပြီး ပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကတော့ ဟန်ဂေရီနဲ့ ဘရာဇီးလ်အသင်းတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ဟာ အကြမ်းတမ်းဆုံး ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး “Battele of Berne” လို့ အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို ဟန်ဂေရီ၊ ဥရုဂွေး၊ အနောက်ဂျာမနီနဲ့ သြစတြီးယားတို့ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဟန်ဂေရီက ဥရုဂွေးကို (၄-၂)ဂိုး၊ အနောက်ဂျာမနီက သြစတြီးယားကို (၆-၁)ဂိုးတွေနဲ့ အနိုင်ရကာ ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ ဟန်ဂေရီအသင်းကို အနောက်ဂျာမနီအသင်းက (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရ ဗိုလ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၆)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
၁၉၅၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ အကျဉ်းချုပ်
Host Country – Switzerland
Dates – 16 June –4July (19 days)
Champions – West Germany (1st title)
Runners Up – Hungary
Third Place – Austria
Goals Scored – 140 (5.38 per match)
Attendance – 768,607 (29,562 per match)
Top scorer(s) – Sándor Kocsis – Hungary (11 goals)
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၅)
ကမ်ဘာ့ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ (ဖီဖာ)ကို စတငျတညျထောငျတဲ့ နှဈ (၅၀)ပွညျ့နဲ့ တိုကျဆိုငျနတေဲ့ ၁၉၅၄ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို ဖီဖာရုံးခြုပျတညျရှိရာ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံက လကျခံကငျြးပခှငျ့ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ သမိုငျးတဈလြှောကျ ရုပျသံကနေ ပထမဆုံးအကွိမျ ကမ်ဘာတဈဝှမျး ရိုကျကူးထုတျလှငျ့ခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲအဖွဈ မှတျတမျးတငျနိုငျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျး ဖွဈပါတယျ။ ၁၉၅၀ ပွိုငျပှဲမှာ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ ဥရုဂှေးအသငျးနဲ့ ဒုတိယနရောရခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလျအသငျးတို့ ခွစေဈပှဲ မကစားရဘဲ တိုကျရိုကျခွစေဈပှဲ အောငျမွငျပွီး ပွိုငျပှဲကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခှငျ့ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ပွိုငျပှဲရဲ့ ထငျရှားတဲ့ဖွဈရပျကတော့ ဟနျဂရေီနဲ့ ဘရာဇီးလျအသငျးတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ကှာတားဖိုငျနယျပှဲစဉျဟာ အကွမျးတမျးဆုံး ပှဲစဉျတဈပှဲဖွဈခဲ့ပွီး “Battele of Berne” လို့ အမညျတှငျခဲ့ပါတယျ။
ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့ကို ဟနျဂရေီ၊ ဥရုဂှေး၊ အနောကျဂြာမနီနဲ့ သွစတွီးယားတို့ တကျရောကျနိုငျခဲ့ပွီး ဟနျဂရေီက ဥရုဂှေးကို (၄-၂)ဂိုး၊ အနောကျဂြာမနီက သွစတွီးယားကို (၆-၁)ဂိုးတှနေဲ့ အနိုငျရကာ ဗိုလျလုပှဲကို တကျရောကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဗိုလျလုပှဲမှာတော့ ဗိုလျစှဲဖို့ ရပေနျးစားနတေဲ့ ဟနျဂရေီအသငျးကို အနောကျဂြာမနီအသငျးက (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရ ဗိုလျစှဲခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၆)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .
၁၉၅၄ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ အကဉျြးခြုပျ